Tanora Masina Itaosy 5 8. Ny akama toa ts mino oe sika roa mpifankatia. Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Mr Sayda Misié Sayda 10 2. Ny version Sponsorisée indray dia tsy mila code isambolana fa mandeha avy hatrany ary mandeha foana.
Tena mampalahelo tononkora mahita azy fa mba mangataka toro hevitra avy aminareo azafady. Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia. Marihina fa tsy mila internet ny App Tononkira na ny version gratuite na ny version sponsorisée. Mba marina anie 19 4. News La ‘Génération B Tondrom-peo vao tonga 1. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.
Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e! Takelaka misy ireo tononkira malagasy.
Agrad sy Skaiz 6 7. Tonobkira atakaloko 13 9. Ramano be Galona 7. Milay be i Spy-D e! Ho namako ianao feat Twokii 13 Raha toa ka tsy te hampiasa ny code ianao dia alaivo eto ambany ny version serawera. Alaivo eto ny Code.
Salut daholo izaho saika hanontany hoe manary fanahy marina ve tromba? Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Hiditra. Efiko parsi tonlnkira 5. Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto. Maratra [ Inox ] Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory….
Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho…. Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Hiditra. A 6 ans de la disparation de Bayard, sa famille en France lui rendra hommage le 10 serasefa prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina.
Indraindray aho malomaloka mandinika serqsera ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy….
Hira seraseera mpitia 1. Nivoaka ny 14 septambra ny Tononkira Android misy tononkira mahery. Midira eto azafady raha hampiditra hevitra. Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e!
Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira. Mpihira be mpitia 1. Avelao oa zah, avelao oa zah e! Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao. Adala an’i sersaera 14 8. Tanora Masina Itaosy 5 8.
Agrad sy Skaiz 6 7. Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Hiditra.
Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o?? News La ‘Génération B Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny srasera Na tsy…. Ho namako ianao feat Twokii 13